दिल्लीको वायु प्रदूषणस्तर ‘अत्यन्त कमजोर’ - A2Z Online Khabar Online Khabar
दिल्लीको वायु प्रदूषणस्तर ‘अत्यन्त कमजोर’
नयाँ दिल्ली, माघ २६ : भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको वायु प्रदूषण स्तर ‘अत्यन्त कमजोर’ बन्दै गइरहेको वायु गुणस्तर र मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसन्धान केन्द्रले आइतबार बताएको छ । दिल्लीमा वायु गुणस्तर सूचकाङ्क उक्त क्षेत्रको औसत ३०१ अङ्कमा पुगेको देखिएको छ ।
त्यस्तै दिल्लीसँगै जोडिएको उत्तर प्रदेशको नोएडाको आसपासमा वायुको प्रदूषण दिल्लीको भन्दा अझ बढी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । नोएडामा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क ३१९ पुगेको जनाइएको छ ।
केन्द्रका अनुसार वायुको गुणस्तर शुन्यदेखि ५१ अङ्कसम्म भएमा राम्रो, ५१–१०० सम्म सन्तोषजनक, १०१–२०० सम्म मध्यम र २०१–३०० सम्मलाई कमजोर मानिन्छ । त्यस्तै ३०१–४०० सम्म अत्यन्त कमजोर ४०१–५०० अङ्कलाई चिन्ताजनक वा खतराजन्य मानिने केन्द्रले जनाएको छ ।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी)ले हावाको गुणस्तर फेब्रुअरी १० मा यस बर्षको सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुग्ने र त्यसपछि क्रमशः यसमा सुधार आउने केन्द्रले उल्लेख गरेको छ ।
प्रदूषणको प्रमुख स्रोत, पीएम २.५ र पीएम १०, क्रमशः २०३ र २१४ पुगेको छ । यी दुबै विन्दु ‘कमजोर’ गुणस्तरलाई जनाउँछ । लोधी सडक खण्डमा वायुको गुणस्तर नयाँ दिल्ली क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको वायु प्रदूषण सुचकाङ्क तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
दिल्लीको प्रसिद्ध बजार क्षेत्र चाँदनी चोकमा ‘निकै कमजोर’ ३३६ अङ्कमा पुगेको छ भने मथुरा रोडमा ३१५ अङ्कमा पुगेको वायु गुणस्तर र मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ ।
बाघ हेर्ने मन छ : बाँके निकुञ्ज आउनुहोला
उत्तरपट्टि गाउँमा खानेपानीको चरम समस्या हट्दै
भ्रमण वर्ष : कोइरालो वन क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै
गाजरका ६ फाइदा
महिलालाई यौन चाहना कतिबेला बढी हुन्छ ? यसो भन्छन महिला!
कोरोनाको त्रासः जापानका विद्यालयमा छुट्टी, कन्सर्ट र पार्कमा भेला हुन प्रतिबन्ध